Musika SaAmai Blogger | Martech Zone
Chitatu, Nyamavhuvhu 12, 2009 Svondo, October 4, 2015 Chris Lucas
vane anga ari munhau nguva pfupi yadarika nekuda kwavo penchant yezvinhu zvemahara uye zvinonhuwira izvo zvinouya nekuteedzerwa-kunoteedzerwa-vakadzi-pombi.
Chinoita kuti amai mabloggi vakatsvaga rakadai boka kubva kuPR pros uye vashambadzi nderekuti vanogona kuunganidza mapoka makuru evakadzi (kunyanya), vanovimba zvavanotaura, vakazvivakira sevanopa mazano, uye vanoziva zvinoda nharaunda yavo. Saka, vatengesi vanodzidzei kubva kuna amai blogger?
Iko kushushikana uko vane amai mabloggi hakugone kunyeperwa uye neshungu iwe yaunayo kune rako bhizinesi haifanire kunyeperwa futi. Iwo mablogi akabudirira kwazvo ndeaya akavakwa nekuda kwekuda kwechinhu icho munyori anacho, mhuri yavo, basa ravo uye mhuri, nezvimwe. Sewe mushambadzi iwe unofanirwa kutsanangura zvinofarirwa nekambani yako. 37 Zviratidzo yakavaka yakakura inotevera kutenderedza kwavo kuda kweiyo yakapusa, inoshanda software.
Campaign Monitor yakavaka huru email kushambadzira chishandiso chakakomberedza kushuva kwemaemail akagadzirwa zvakanaka. Chero zvingave zvaunoshuvira, zviite kuti zvipinde mukushambadzira kwako uye uyeuke, vatengi vako vanogona kutaurira kushuva chaiko kubva kune chimwe chinhu chakagadzirwa!
Kubatana nevaverengi vavo ndizvo zvinoitwa naamai amai mabloggi. Ivo vanoziva mabhatani ekusundira uye maitiro ekutyaira vaverengi vavo kuita chiito nekuti vane zvakafanana bond. Chokwadi, havazi vese vatengesi vanogona kuva nehukama hwakasarudzika senge amai pamwe nevatengi vavo, asi ivo vanogona kuwana imwe mhando yeakajairika chinongedzo.
Semushambadzi iwe unofanirwa kunzwisisa izvo zvinoda vatengi vako uye nemabatiro aungaita navo. Kunyangwe iri kuburikidza ne ongororo iri nyore pamhepo, kana kuburikidza nezvimwe zvishandiso zvepamhepo seSocial Media, kutsvaga nzira yekubatana nevatengi vako kwakakosha munyika yanhasi yekutengesa kune-kune-mumwe.
Vazhinji amai amai blogger vakaunganidza chikonzero. Kunyangwe chiri chirwere kana Musikana Scout Cookies. Sebhizimusi kuda kwako kunogona kuonekwa kuburikidza nezvaunotenda. Kunyangwe iwe uine nyaya yekuziva munharaunda kana chikonzero cheakareruka, anoshanda maturusi, iwe unogona kuunganidza vatengi vako uye vangangove vatengi uye wovaita ako brand brand vanotsigira akavakirwa padhuze nekutenda kwakagovaniswa.
Nyaya iripo, Salesforce akakurumidza kuzivikanwa seNo Software CRM uye ikozvino anozvirumbidza makambani makumi mashanu nemapfumbamwe sevashandisi vemhinduro yavo. Ivo vakabuda vachikwikwidza vachipesana neakasungwa pasi CRM mhinduro pamaseva emakambani uye democratized CRM nekukutendera iwe kuti uwane yako dhatabhesi chero kupi zvako pasi.
Ethos yakavaka mhando yemvura yakatenderedza chikonzero - mvura yakachena yevana - uye ikabatsira kuti igovaniswe kuburikidza Starbucks. Paunotenga Ethos urikutenga nekuda kwekutenda kuti vana vanofanira kuva nemvura yakachena. Chako chiratidzo chinofanira kumira kuti chimwe chinhu chionekwe, asi rangarira kana iwe uchimiririra zvese iwe zvausingamiriri chero chinhu… saka sarudza zvine hungwaru.